बैंक Archives - Page4of 155 - Chanakya Post
राष्ट्र बैंकको नयाँ प्रयोग, अब झुत्रा नोटबाट ब्रिकेट !
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याउन नमिल्ने झुत्रो, मैलो, पुरानो तथा च्यातिएका नोटलाई जलाई ब्रिकेट बनाउने प्रविधि भित्र्याएको छ । नेदरल्यान्डस्बाट पहिलोपटक भित्र्याइएको सो प्रविधिको प्रयोगबाट अब प्रचलनमा ल्याउन नमिल्ने नोटलाई भट्टीमा डढाएर निस्कने खरानीबाट इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने ब्रिकेट बनाउन थालिएको छ । चलनचल्तीमा ल्याउन नमिल्ने नोटलाई विगतमा जलाएर नष्ट गरिन्थ्यो । […]
देशका ७५० पालिकामा पुगे बैंकका शाखा, यी हुन् बैंक पुग्न बाँकी ३ गाउँपालिका
काठमाडौं । देशका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्ममा देशका ३ स्थानीय तह मात्रै वाणिज्य बैंक पुग्न सकेको छैनन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्म देशका ७४७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा पुगेका थिए । राष्ट्र बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्म सबै […]
१ लाख बढीले लिए १ खर्ब २२ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा, अधिकांश कृषिमा
काठमाडौं । कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीलाई प्रदान गर्नका लागि अगाडि सारिएको पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा १ खर्ब २२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्म १लाख ४ हजार १०९ ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । आव २०७७÷७८ मा कूल १ खर्ब ४८ अर्ब ७५ करोड पुनरकर्जा […]
‘पहुँच नभएका’ले पनि अब सडकले नछोएको जग्गा धितो राखेर सहजै ऋण पाउलान ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनमा नेपालको वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमा दूरगामी महत्व राख्ने दुईवटा विषयहरू पनि अटाएका छन् । यो निर्देशनले नेपालमा ऋणको पहुँच वृद्धिमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ । निर्देशनका अनुसार अब कृषि, हस्तकता तथा […]
ग्लोबल आइएमई बैंकले विद्युतीय गाडी किन्न ७.२९ प्रतिशतमै ऋण दिने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले विद्युतीय गाडी किन्न ७.२९ प्रतिशत (प्रिमियम सहित) ब्याजमै ऋण दिने भएको छ । बैंकले चाडपर्वलाई लक्षित गरी अटो एक्प्रेस (ड्राइभ उत्सव’ योजना अन्तर्गत यस्तो अफर ल्याएको हो । यस्तै, बैंकले अटो एक्प्रेस योजना अन्तर्गत नै ७ वर्ष अवधिका लागि ८.१९ प्रतिशत ब्याजदर (प्रिमियम सहित)मा अन्य सवारी साधन कर्जा दिने भएको […]
अब मोटरबाटो नपुगेको जग्गा धितोमा बैंकबाट ऋण पाइने, कति लाखसम्म पाइन्छ ?
काठमाडौं । अब कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय गर्न मोटरबाटोले नछाएको खेतीयोग्य जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै व्यवसाय गर्न खेतीयोग्य जग्गा राखेर २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । बैंकका प्रत्येक शाखाले उक्त कर्जाको […]
जनसंख्याभन्दा बैंक खाता धेरै, निक्षेप खाता ३ करोड ६३ लाख पुगे
काठमाडौं । देशभरका कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना गरी वित्तीय पहुँच पुर्याएका छन् । धादिङको रुवीभ्याली, जाजरकोटाको जुनीचाँदे र बझाङको साइपालमा भने वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्न सकेको छैन । ती स्थानीय तहमा पनि वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय स्थापना लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक […]
बैंक अफ काठमाण्डूको कन्ट्याक्टलेस डेबिट कार्ड सञ्चालनमा
काठमडौं । बैंक अफ काठमाण्डूले प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने क्रममा कन्ट्याक्टलेस भिसा डेबिट कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘नियर फिल्ड कम्युनिकेशन’मा आधारित उक्त कार्ड एनएफुी युक्त अर्थात ट्याप सुविधा भएको पीओएस मेसिनहरूमा प्रयोग गरी ग्राहकले भुक्तानी गर्न सकिने सुविधामा आधारित सुविधा ल्याएको हो । यस प्रविधिमा […]